Kerry Blue Terrier Dog izu Ozi & Ajụjụ - Dịrị
Kerry Blue Terrier Dog izu Ozi & Ajụjụ
Kerry Blue Terrier mara site na isi ulo ogwu.
Nchịkọta Nzuzo nke reedkpụrụ Nzuzo (CKC / AKC / KC)
Elu: Nkịta 18-19 1/2 ″ (46-48 cm) na akpọnwụ; nkịta 17 1/2-19 ″ (45- 47 cm). Arọ: Nkịta 33-40 lb (15-17 n'arọ); bitches ubé dị obere.
Ọdịdị Izugbe: Kachasị mma, njikọta ọnụ na etu esi ahazi, nke ọma mepụtara na ahụ ike na-egosi ezi nguzo. Agwa: Obere igwe dị egwu ma dịkwa ike.
Na-egosiputa àgwà nke njikere mkpebi siri ike na doro Terrier style na agwa nile. “Egwuregwu ịdọ aka ná ntị.”
Isi dị ogologo ma dịkwa mma nke nwere ntị nwere ihu V na anya gbara ọchịchịrị na-egosi oke ụjọ. Olu dị ọcha ma moderately ogologo, enịm ke ọma azụ azụ n'ubu. Obi miri emi, ma nke agafeghị oke obosara.
Straightkwụ kwụ ọtọ, moderately ogologo ọma muscled. Laa mkpụmkpụ, ike na ọkwa. A na-eburu ọdụ ahụ ka ọ kwụ ọtọ. Uwe mkpuchi ahụ dị nro dị nro, okirikiri ma na-enwu gbaa, onyinyo ọ bụla site na nke miri emi site na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo na ọlaọcha. Agba na-ewekarị ọnwa 18 iji kpochapụ.
Black siri ike bụ iru eru dị ka dewclaws na ụkwụ azụ.
Uwe ahụ bụ otu n'ime ihe ndị na-adọrọ uche nke ụdị ìgwè a. A mụrụ Pus ma ọ bụ nke siri ike na-acha anụnụ anụnụ (mgbe ụfọdụ obere ihe na-acha ọcha na obi) ma ọ bụ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, na akpụkpọ ahụ ha, karịsịa na azụ, bụ acha anụnụ anụnụ.
Ka ha na-etolite, uwe elu ahụ malitere “ihicha” ma ọ bụ mee ka ụcha chara acha. Ọtụtụ mgbe ụda na-acha aja aja ma ọ bụ ụda na-apụta n'oge usoro nhichapụ; nke a dị mma ma na-apụ n'anya ka nwa ọhụrụ ahụ na-etolite. Kpụrụ ahụ gosipụtara na uwe ahụ kwesịrị ikpochapụ ọnwa 18; tupu nke a, a ga-anabata ụda tan ma ọ bụ oji siri ike na mgbanaka ìgwè.
N'agbanyeghị nkọwapụta na agba tozuru etozu kwesiri iru ọnwa iri na asatọ, ọtụtụ ndị Kerries na-ewe ogologo oge iji kpochapụ ma ghara iru agba ikpeazụ ha maka afọ 2 ma ọ bụ 3. Isi ihe gbara ọchịchịrị na ụkwụ, ọdụ, na isi nwere ike ime ma bụrụ ndị a nabatara ma ọ bụrụhaala na agba agba adịghị agbatị olu site na isi.
Ọ bụ ezie na a na-anabata ndò ọ bụla nke acha anụnụ anụnụ-acha anụnụ anụnụ, ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-achọ ime ihe na-acha anụnụ anụnụ. Uwe ndị na-acha ọkụ, ọla ọcha na-enwekarị adịghị mma; ha na-abụkarị owu na enweghị oke. Uwe mkpuchi ndị a na-etokwa nwayọ nwayọ.
N'aka nke ọzọ, nkịta ndị kachasị ọchịchịrị na-enwekarị uwe mkpuchi mara mma; dị oke oke na ederede dị mma na ebili mmiri. Agbanyeghị, oji siri ike bụ erughị eru ma ọtụtụ ndị ọka ikpe na-anabata nkịta nwere ọkara.
N’ututu, ha na-ehi ìgwè ehi; n’ehihie, ha na-abata, na-azọgharịkwa ụkwụ na-atụ bọta; n'ehihie ha na-azụ ehi ọzọ ma nri anyasị na-echekwa atụrụ, ọkụkọ na geese, na ezi.
Ihe ikpeazu ha ga-eme tupu ha lakpuo bu iyipu uwe ogologo nke onye Irish.
onye Irish Kerry breeder na-ede na magazin 1924, nke Montgomery kwuru.
Kerry Blue Terrier (nke a makwaara dị ka Irish Blue Terrier na Ireland) bụ otu n'ime ndị atọ nwere njikọ chiri anya, ogologo ụkwụ, nwere ebumnuche niile na-arụ ọrụ bụ nke mejupụtara site na ngwakọta nke akwa agba, akwa na ọdịdị nke achọtara na Obodo Irish n'ime narị afọ ole na ole gara aga.
Mụ nwanne nne nwoke abụọ nke Kerry bụ ọdụ ụgbọ mmiri Irish na Soft-Coated Wheaten Terrier; a na-ewere onye nke a dị ka nna ochie nke Kerry Blue.
Iwu machibidoro inwe wolfhound oge ochie nke Irish (ọ bụ naanị ndị okenye ka e nyere ikike ahụ), ndị na-agagharị agagharị na-elekwasị anya na ịzụlite ozuzu maka mkpa na ụtọ ha.
Ndị nkịta ndị a na-akọ ugbo kwesịrị ijikọta ịzụ anụ, na-echekwa, ịchụ nta, na-ewepụta ma na-ebibi talent. Ha bụkwa ndị otu ezinaụlọ na-eso ụmụaka egwu egwu ma na-eche ha nche ma na-agbada n'okporo ọkụ.
A na-agafe obe n'etiti nkịta dị iche iche gụnyere hound iji nweta àgwà ndị a ma ọ ga-abụ na oke ọbara nke wolfhound nke Irish bịara na ụjọ.
Otu akụkọ a ma ama banyere Kerry bụ na n'oge mwakpo nke Armada Spanish, obere spaniel nke nwere uwe na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo na-ama mmiri si n'ụsọ ụgbọ mmiri wee daba na ndị na-ama jijiji, na-amị mkpụrụ nwere ụdị egwu na uwe na-acha uhie uhie.
Mgbanwe ndị ọzọ dị na akụkọ a mere ka nkịta na-awakpo dị ka ihe na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ site na ọdụ ụgbọ mmiri dị na Tralee Bay na dịka nkịta mmiri Portuguese si ụgbọ mmiri Portuguese.
Kerry dị ka ụdị dị iche iche gosipụtara obere oge karịa Irish na Wheaten, na-apụta na ndetu nke ndị nkịta na-anụ ọkụ n'obi na njedebe nke 1800s.
Ọ bụ ezie na a na-ewere Wheaten dị ka otu n'ime ndị nna ochie nke Kerry, ihe ka ọtụtụ na Kerry na-ekwu na agbụrụ nke ndị na-acha anụnụ anụnụ na uwe mkpuchi dị adị ruo ọtụtụ narị afọ, ọkachasị na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ Irish nke Kerry na gburugburu ya.
Ebu ụzọ gosipụta Kerries na England na mbido 1920s ma ụlọ ọrụ Kennel mara ya na 1922. Ndị mbụ Kerry Bad na North America bụ anụ ụlọ ise e webatara na 1918-9; ìgwè ahụ malitere na ihe ngosi na mbido 1920s.
Ejirila Kerries iji weghachite obere egwuregwu na mmiri mmiri, maka ịzụ atụrụ na ehi, dịka nkịta ndị uwe ojii na United Kingdom, yana nkịta nche na nrụnye ndị agha UK n'oge Agha Secondwa nke Abụọ.
“Kerry abụghị naanị nkịta onye ọ bụla - ọ mara ihe karịa nke ahụ. Ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya ma ọ bụ ịnakwere ya dị ka otu n'ime ezinụlọ, mgbe ahụ ọ na-agbanyeghị ụdị mmadụ ahụ nke bụ ama ama ya.
“Iji nwee mmasị na Kerry, ị ga-ebu ụzọ nwee mmasị na Irish, n’ihi na Kerry bụ nnọọ akụkụ nke ala nna ya. Nanị omenala ndị Irish m na-ahụbeghị na Kerry bụ ị smokingụ anwụrụ ụrọ. O nwere àgwà ndị ọzọ niile: ọchị ọchị na-ada ụda, ihu na iwe iwe. ”
isi ike, mpako, mkpebi siri ike, obi ike, obi ike, nwere ike ịbụ pugnacious
nwere ọgụgụ isi, na-achọ ịmata ihe, na-azụ ọzụzụ, na-anụ ọkụ n'obi ime ihe na-atọ ụtọ
dị ike, mgbe ụfọdụ ruo n'ókè nke ime mkpọtụ, na egwuregwu
nwee agwa ọma, nwee obi ụtọ, nwee ịhụnanya
nkịta 'ezinụlọ', ọ bụghị nkịta otu onye
dị mma na ụmụaka, nwere ọnụ nwayọ
nwere ume, ume, na ntachi obi; dị oke ohi.
Errykpụrụ onye nwe Kerry:
guzosie ike, agbanwe agbanwe, pụtara ìhè, ma kpebisie ike (ndị isi ike karịa Kerry!)
na-atọ ụtọ-ịhụnanya, mmetụta ịhụnanya, energet, ezi echiche nke ọchị.
“Ndị na-ejighị n'aka, na-edo onwe ha n'okpuru, na-ahụkarị ndị mmadụ n'anya ma na-achọsi ike nwere nsogbu ịzụlite ụdị a. Ọ dị mkpa ịmara ma jiri nlezianya jiri obiọma mee ihe ị na-atụ anya ya n'aka nkịta. ”
'' - Helen Roy, Kel-Tara Kennels, BC, Canada (nke e hotara na Kerry Blue Notes, KBTCC, Winter 1994)
Kerries anaghị abụkarị ndị na-eri nri. Nye nri nri kacha mma maka ezigbo uwe na ahụike na-adịgide adịgide. Ndị na-azụ anụ ga-enye nkọwa zuru ezu site na ahụmịhe ha. Akọrọ nri bụ ihe kasị adaba ebe ọ bụ na ọ bụ obere ọchịchọ chịngọ aji. A na-ejikwa nri akọrọ belata nri nke Tartar.
Kerries nwere ọtụtụ edozi chọrọ, iji tụnyere ego dị mkpa maka poodle. Nchapu ha kwa izu dị mkpa ma na-ehicha kwa ụbọchị dị mma iji debe uwe na akpụkpọ ahụ n'ọnọdụ kachasị elu na enweghị ihe mgbochi.
Achọrọ ịsa ahụ na ịchachasị kwa izu 6-8. Uwe nwere ike ịkpụ ma ọ bụ nụchaa; nke a bụ nke mbụ na-egosi.
Toolsgba alụkwaghịm gụnyere ihe nkocha nwere pịrị ọnụ, mgbanaka igwe nwere ezé na ezé ezé, ahịhịa na-acha uhie uhie, ụdị guillotine, ihe nchacha osisi, mpempe akwụkwọ, na hemostats (ike - dịka, ụdị mkpọchi na ndụmọdụ agbagoro) iji dọpụ ntị.
Akwụkwọ Kerry ndị edepụtara n'okpuru na ọtụtụ akwụkwọ ejiji dị iche iche dị mma na-akọwa njiri kwesịrị ekwesị. Họrọ ọkachamara na-edozi edozi nke ọma - ọtụtụ ndị amaghị Kerries na nkịta ga-ejedebe dị ka Schnauzer.
The Kerry Blue nwere agafeghị oke mmega chọrọ. Ogige gbaa ogige ebe ọ nwere ike ịgba ọsọ dị mma. Ekwesịrị ịgbakwunye nke a site na ịgagharị kwa ụbọchị. Ndị Kerries nwere ịnụ ọkụ n'obi na-enwe obi ụtọ ma nwee mmasị igwu bọọlụ na frisbee, na-eme ka ọ dị mfe mmega ahụ ọbụna na obere ohere. Imirikiti na-enwe mmasị igwu mmiri.
Malite n'isi ụtụtụ; banye na klaasị ụlọ akwụkwọ ọta akara nke puppy ozugbo emechara agba. Izu Iri na isii ọ bụghị n'oge, mana bido na olu akwa ịda mba n'oge a, ọ bụghị olu olu ma ọ bụ nke nylon ('choke').
Jiri nkuzi na-akpali akpali, ọzụzụ nkwalite mkwado - ọgbụgba akwara siri ike na ọgụgụ isi nke Kerry ga-aza azịza kachasị mma maka ọzụzụ ma ọ bụrụ na emere ya ka ọ “baa uru” ma nwee mmụọ ebumpụta ụwa nke ime ihe masịrị. Ihe omumu agha gha adi obere ma dikwa obi uto maka nkịta na onye na-enye ọzụzụ ma ọ bụ na Kerry ga-agwụ ike.
Nghọta Kerry nke ihe achọrọ na-abụkarị nghọta, na ọzụzụ nwere ike ịga n'ihu n'ụzọ dị ịrịba ama ngwa ngwa. Kerries na-eme nke ọma na ọrụ nrubeisi; ikiri ụkwụ nwere ike ịbụ mmega ahụ kachasị sie ike ịzụ.
Ọtụtụ ndị Kerries enwetala U.D. aha ma ufodu enwetala aha T.D. Ndị Kerry esonyela na agility na flyball.
“Naanị Homelọ” Kerries
Agbanyeghị na mmasị ha bụ isoro ndị otu ha, ndị Kerries na-agbanwe agbanwe, nkịta na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ịbanye n'ime ezinụlọ ebe onye ọ bụla na-arụ ọrụ na mpụga ụlọ ụbọchị.
Sortdị mmekọrịta a ga-achọ nraranye sitere n'aka ndị ezinụlọ niile ka ha na Kerry na-emekọ ihe mgbe ha nọ n'ụlọ - mmega ahụ, egwuregwu, ọzụzụ wdg. Gị na onye na-azụ ihe kwurịtara okwu ma nyere ha aka n'ịhọrọ nwa pupị nwere ezigbo ọnọdụ maka ndụ a. .
Okenye Kerry nwere ike ịba uru maka ndị na-enweghị ike ịbịa ụlọ n'ehihie iji lekọta nwa pup.
A na-atụ aro ọzụzụ crate. Vari-Kennel 300 ma ọ bụ 400 bụ nha kwesịrị ekwesị.
Nsogbu Ọrịa Pụrụ Iche
Kerry Bad bụ nkịta dị mma nke na-anọgide na-arụsi ọrụ ike na ndụ ha niile. Oge ndụ nke Kerry sitere na ihe dịka 10 ruo ihe dịka afọ 18 na nkezi banyere afọ 13. Nsogbu ahụ́ e ketara eketa adịghị adịkebe, ha anaghịkwa eyi ndụ egwu.
E depụtara nkọwapụta ọnọdụ ahụike e depụtara na Kerries n'okpuru; n'ozuzu, ọnọdụ ndị a abụghị ihe ọhụrụ belụsọ ma egosiri ya.
Lump na akpụkpọ ahụ dịkarịsịrị na Kerries. Ndị a na-abụkarị epidermal cysts / sebaceous gland cysts, ma ọ bụ dermal cysts. Dịka ha anaghị akpata nsogbu ọ bụla, agbanyeghị, ha nwere ike gbapịa ma ọ bụ bute ọrịa. Ekwesiri ighota onye okacha mara nke na-eto ngwa ngwa ma obu nke buru ibu.
Corns (footpad keratoses), warty warty, na calluses na na n'etiti footpads nwere ike imetụta ụfọdụ nkịta. Ndị a nwere ike na-egbu mgbu ma na-emetụta gait. Ọka nwere ike keta ya ma nwee ike jikọta ya na obere mpe mpe akwa ma ọ bụ ụkwụ dị larịị. Enwere ike iwepụ ha ahụ mana enwere ike ịghaghachi ọzọ. Ọgwụ nje na corticosteroids bụ nhọrọ ọgwụgwọ ọzọ n'ọnọdụ ụfọdụ. Abụrụ keratoses nwekwara ike ime.
Ọrịa ụmụaka na-arịa ọrịa bụ nsogbu na-adịghị ahụkebe ma o doro anya na ọ na-eme naanị na ụfọdụ ọbara. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ dị, ọ ga-apụta na nwata, yabụ tupu ọnwa isii.
Entropion (ntụgharị nke nkuchi anya na lashes na eyeball na-akpata iwe nke cornea) nwere ike ịdị dị ka ọnọdụ eketa ma ọ bụ nke enwetara. Achọrọ ịwa ahụ ahụ.
Keratoconjunctivitis Sicca (KCS, anya akọrọ) bụ ọnọdụ sitere na enweghi akwa akwa. Nsogbu a nwere ike ịbụ nke ebutere ma ọ bụ nke ọtụtụ ọnọdụ kpatara. Achọrọ ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ma ọnọdụ nwere ike ịbụ nke na-adịghị ala ala.
Kerry ntị na-adịkarị mfe na ọrịa ndị na-efe efe ntị na-efe efe (na-adịghị ala ala otitis externa) ebe ọ bụ na a na-enwekarị nnukwu ntutu na canal ntị. Ọ bụrụ na ntị adịghị edebe ọcha, kpoo ma kpụọ, wax, unyi, na mmiri na-adị mfe ikpokọta ma na-azụlite nje na fungal.
Neuronal Abiotrophy na-aga n'ihu (nsogbu akwara na-emetụta gait) bụ ọnọdụ na-adịghị ahụkebe nke ketara eketa, ịga n'ihu na enweghị ọgwụgwọ. Mgbaàmà na mbụ na-egosi n'etiti ọnwa 2 - 6. Site na otu afọ, nkịta enweghị ike iguzo. Ebu ụzọ chee na ọrịa a sitere n'otu usoro ọbara, mana usoro ndị sochirinụ amalitela na usoro ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị usoro nyocha maka ọnọdụ ụgbọelu, agbanyeghị USKBTC na-arụ ọrụ na usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa. Kpọtụrụ Kọmitii Ahụike na Jenetik maka ama ndị ọzọ (adreesị dị n'okpuru).
Ezé ezighi ezi (ọkachasị premolars) dịkarịsịrị na Kerry Blue Terriers. Ọ bụ ezie na nke a abụghị disqualification dị ka ọkọlọtọ, a kwadoro ndị na-azụ anụ ka ha were ya dị ka mmejọ. Ọnwụ na-achagharị na-achapụ na-achapụtakwa. Puppies with a _slight case_ of these conditions may “outgrow” it, ma ọ bụrụ na nkịta gafere ya uto ogbo na ọnọdụ ahụ ga-abụ na-adịgide adịgide.
Canine hip dysplasia na-apụtakarị ma e jiri ya tụnyere ụdị anụ ndị ọzọ n'ihi oke a dị oke na musculature siri ike. Ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-azụlite ngwaahịa ozuzu ma kwado ya site na Orthopedic Foundation for Animals (na US). N'ihe banyere 1992, nke redio e nyefere na OFA maka nhazi, 11% bụ displasic na 5% bụ ókè. E kesara pasent pịrị apị Hip dị ka: Ezigbo (12%); Ezi (54%); Ezigbo (18%). Biko rịba ama na nọmba ndị a na-anọchi anya redio ndị ahụ e nyefere na OFA maka asambodo; ọtụtụ nkịta anaghị ekpuchi, ya mere amaghi ụdị agbụrụ dị iche iche.
Subluxation nke patella na-eme mgbe ụfọdụ. Anaghị anabata ikpere ikpere ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ, ma ọ bụ n'ihi nsị nkwonkwo na-adịghị ike na / ma ọ bụ nzukọ ikpere na-ezighi ezi. Nke a nwere ike ịbụ ihe enwetara (n'ihi mmerụ ma ọ bụ mmerụ ahụ) ma ọ bụ ọnọdụ ketara eketa.
Hypothyroidism abụghị ihe a na-ahụkarị na Kerries dị ka n'ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Pasent iri itoolu nke ikpe na-akpata autoimmune thyroiditis. Enwere ike idozi ọnọdụ ahụ na mgbakwunye hormone.
Achọpụtala ọrịa autoimmune na-eme na Kerry Blue dị ka ụdị ndị ọzọ. Ihe karịrị ọrịa 40 gbakọtara n'okpuru isi okwu a nwere otu agwa bụ na a na-akpali usoro nchekwa nke nkịta ịwakpo anụ ahụ nke nkịta.
Achọpụtala ihe anọ kpatara ihe kpatara ya: usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa; mmetụta nke hormonal; nje (karịsịa nje); na nrụgide. Nchegbu ndị dị ugbu a gụnyere ụkọ ihe kpatara Factor XI (ụbara eketa ọbara na - eme ka ọbara ghara ịdị njọ), von Willebrands ọrịa (ọbara ọgbụgba na - egbochi ọbara na - adịghị mma), yana ọrịa Addison (ọrịa adrenal gland na - adịghị adị).
Nke ahụ ọ bụ ____? (poodle, schnauzer, poodleXschnauzer, Airedale, nkịta mmiri nke Portugese, scottie….)
Mba Kerry Blue Terrier bụ ụdị egwuregwu a na - adịghị ahụkebe ma anaghị ahụkarị ya na mpụga ihe ngosi nkịta. Ọ ga-adọrọkarị uche nke ukwuu na ọha.
Ndị Kerries dị mma na ụmụaka?
Eeh. Ha hụrụ ụmụaka n'anya na egwuregwu ha siri ike. Kerry siri ike ma sie ike nke ọma ma ọ naghị adị mfe mmerụ ahụ. Omume ọma ha na-anabata ibe ha ga-eme ka ha ghara ịdị na-echu ụra ma ọ bụ na-akpa aghara.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ọnọdụ ọ bụla metụtara ụmụ aka, ụmụ aka ma ọ bụ ụmụ nkịta kwesịrị ka a na-elebara ha anya nke ọma iji gbochie mmerụ mberede ma ọ bụ omume mmekpa ahụ.
Ọ dị mma ka ụmụaka toro eto soro nkịta gaa klaasị ọzụzụ iji hụ na egwu ahụ anaghị ele nwa ahụ anya dị ka onye nọ n'okpuru ya.
Ndi Kerries dị mma maka ndị nwere nkịta nkịta?
Enwere ike. Onweghi ihe dịka nkịta na-abụghị nke na-arịa ọrịa. Mana n'ihi na Kerries anaghị awụfu, a na-atụ aro ya mgbe ụfọdụ nye ndị nwere ọrịa nfụkasị na ha nwere ike ịnagide ya karịa ụdị ịwụfu.
Otú ọ dị, ihe nfụkasị ahụ bụ ihe pụrụ iche nye onye ọ bụla. Onye nwere nsogbu a kwesịrị ịnọ ogologo oge dị ka o kwere mee na Kerries na ebe obibi nke ndị nkịta iji chọpụta ma ụdị anụ ahụ kwesịrị ekwesị tupu ọ laa otu ụlọ.
Ndị Kerries na-eme nche dị mma?
Eeh. Ha nwere ogba-ama-ahia ka ha gwa ndi nwe ha ihe nlere. Kerry na-eto eto n'ọnụ ụzọ bụ nnukwu ihe.
Agbanyeghị, ozugbo onye nwe ya nabatara onye ọbịa ahụ, nkịta nabatara onye ọbịa ahụ ma nwedịrị ike ịrịọ ka ọ kpọọ.
Ndị Kerries na ndị nkịta ndị ọzọ na-alụ ọgụ?
Kerry Bad gosipụtara mmejọ nwoke na nwoke. Dika otutu udiri udiri, ndi Kerries mbu nwere agha agha na ime ihe ike. Nlekọta anya nke oma emeela ka ihe Kerry di nma.
Enwere ike zụọ Kerry ka ọ tụlee azụmaahịa ya, mana ọ gaghị ala azụ nkịta ọzọ ma ọ bụrụ na a wakporo ya. Izizi ihe na nguzosi ike, nhazi oge niile ga - egbochi nsogbu n'ọtụtụ ọnọdụ, mana ọ kachasị mma ịnwe naanị otu nwoke Kerry nọ na ezinụlọ.
Expertsfọdụ ndị ọkachamara Kerry na-adụ ọdụ inwe naanị otu nwoke n'ezinaụlọ, oge, n'agbanyeghị agbanyeghị ya.
Ndị Kerries ọ na-atọ ụtọ ma ọ bụ na-ebibi ihe?
Imirikiti ndị Kerries anaghị eme mkpọtụ dị ka ihe omume ntụrụndụ. Ha na-echekwa ogbugbo ha maka ịdọ aka na ntị na nnabata. N'ihi na ha bụ ndị ụjọ, ndị Kerries nwere nsị na-egwu ala.
Enwere ike belata ma ọ bụ kpochapụ igwu ala site na ọzụzụ na site na idobe Kerry ma nwee obi ụtọ. Kerries nwekwara jaws siri ike. Gbanwee ihe mmuo ha na-eri ka ha sie ike igwuri egwu.
Aha Poodle: 450+ zuru oke, Aha ndị mara mma na mara mma maka Poodles
Shih Tzu Yorkie Bụ Ngwakọta Nkịta Dị Mma Maka Gị?
Dutch onye ọzụzụ atụrụ gold retriever mix
nkịta m na -anọgide na -egwu egwu ma na -akpọ nkụ
beagle n'akpa uwe ma e jiri ya tụnyere beagle
Ebi ehi na -amịpụta foto